Interview with Ashok Byanju | 'एकिकृत खानेपानी आयोजनाले स्वस्थ जीवन र सम्वृद्ध नगर बनाउनेछ'
'एकिकृत खानेपानी आयोजनाले स्वस्थ जीवन र सम्वृद्ध नगर बनाउनेछ'
मेचीकाली : 2013-06-27 13:20:10
संयोजक, काभ्रे उपत्यका खानेपानी निर्देशन समिति
नेकपा एमाले काभ्रेका उप सचिव अशोक ब्याञ्जु २०५४ सालमा धुलिखेल नगरपालिकाको उप प्रमुख पदमा विजयी भई त्यहि समय देखि नेपाल नगरपालिका संघको उपाध्यक्ष पदमा कृयाशिल हुनुहुन्छ । स्थानीय निकाय बलियो नभई कुनै देश र राष्ट्र सम्वृद्ध हुन नसक्ने उहा“को धारणा छ । स्थानीय निकायलाई सम्वृद्ध बनाउन ब्याञ्जुले थाईलाण्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, भारत, पाकिस्तान, चिन, श्रीलन्का, भुटान, भियतनाम, कम्बोडिया, वर्मा, जापान, साउदि अरव, हङकङ, सिंगापुर, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया स्विजरलाण्ड, फ्रान्स, अमेरिका लगायत थुप्रै देशहरुको भ्रमण समेत गरिसक्नु भएको छ ।
संघियता भन्दा विकेन्द्रिकरणको माध्यमबाट मुलुकको विकास सम्भव छ भन्ने ब्याञ्जु पछिल्लो समय काभ्रे जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र आसपासका गाविसहरुलाई समेत मिलाएर राजधानी नजिकको बैकल्पिक शहरका रुपमा विकास गर्ने अभियानमा पनि जुट्नु भएको छ । एकिकृत विकासका योजनाहरुले आम काभ्रेबासीसमेत सम्वृद्ध हुने धारणा राख्ने ब्याञ्जु यतिखेर काभ्रे उपत्यका खानेपानी निर्देशन समितिका संयोजक समेत हुनुहुन्छ । त्यसको अलावा उपाध्यक्ष, धुलिखेल क्याम्पसका संस्थापक अध्यक्ष, मोफकसलको ‘क’ श्रेणीके चेष्टा साप्ताहिकका प्रकाशक/सम्पादक, प्राईम एफएम १०४.५ मेगाहर्जका प्रवन्धक निर्देशक, हरिसिद्धी ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लिका अध्यक्ष, अर्थभुमि वचत तथा ऋण सहकारी सस्था, काठमाण्डौका अध्यक्ष, जग्गा विकास चक्र कोष नेपाल सरकारका सदस्य, मझ्यौला शहरको लागि शहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाका सदस्य, र्सावजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका सदस्य रहेका छन् । थुप्रैसंघ संस्था मार्फत सामाजिक क्षेत्रमा कृयाशिल ब्यक्तित्व अशोक ब्याञ्जु सँग काभ्रे जील्लाका प्रमुख शहरमा शुरु भएको एकिकृत खानेपानी आयोजना, शहरीकरण लगायत अन्य समसामयीक विषयसँग सम्वन्धीत रहेर गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप
– काभ्रे उपत्यका एकिकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य कह“ा पुगेको छ ?
धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकामा रहेका ६६ हजार जनताको लागि स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी २४ सै घण्टा आउँदा २५ बर्षसम्म घर–घरमा पु¥याउने उदेश्यले संचालन गर्न लागिएको एकिकृत खानेपानी आयोजनाको काम शुरु भैसकेको छ । आयोजनाले ठेकेदारसँग सम्झौता समेत सम्पन्न गरी ठेकेदारले यही महिनाको अन्त्य देखी प्रारम्भीक काम सुरु गर्देछ । मोविलाईजेसनको लागि १५ प्रतिशत नगद रकम ठकेदारलाई उपलव्ध गराईसकिएको छ । आयोजनाको लागि चाहिने सामाजिक, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन भै सकेको छ । संस्थागत संरचना र व्यवसायिक योजनाको तयारी हुँदैछ । यो आयोजनाको कुल लागत ८७ करोड ५२ लाख रुपैया छ ।
– काभ्रे उपत्यका एकिकृत खानेपानी आयोजनाको चुनौती र उपलव्धी के के छन् ? यो आयोजना कहिले सकिएला ?
कुनै पनि आयोजनाको अवसर र चुनौती दुवै हुन्छ, हामीले चुनौतीलाई जिम्मेवारीको रुपमा महसुस गरेर तीन नगरका जनताको स्वास्थलाई ध्यानमा राखेका छौ । शहरका भावी पुस्ताको लागि यो अवसर पनि हो भने हाम्रा अगाडी यो आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सबै चुनौतीहरु लाई जिम्मेवारीको रुपमा लिएको हुनाले हामीलाई पनि यो अवसर जस्तै लागेको छ । कुनै न कुनै ब्यक्ति वा संस्थाले चुनौती सामना गर्न चाहेन वा लागेन भने विकासको नयाँ ढोका त कहिल्यै खुल्दैन । त्यसैले हामी सिङ्गो नगरवासी, श्रोत क्षेत तथा सरोकारवालाहरु यो आयोजना सम्पन्न गर्न गौरवका साथ लागिरहेका छौं र चुनौती पनि मोलिरहेका छौं ।
यो आयोजना तीन वर्षमा सम्पन्न हुनेछ । तीन नगरमा १० हजार घर धुरीले गुणस्तरिय, स्वच्छ र सर्वसुलभ पानी पिउन पाउनेछन् । यो योजनाले विद्यमान काकाकुलको अवस्था अन्त्य गर्ने छ । हाल धुलिखेलमा प्रति सेकेण्ड १३ लिटर पानी उपलब्ध छ भने नयाँ योजनाले थप १७ लिटर उपलव्ध गराउनेछ । बनेपामा यतिखेर प्रति सेकेण्ड ५.६ लिटर पानी उपलब्ध छ आयोजना संचालन पश्चात थप २२ लिटर उपलव्ध हुनेछ । यसै गरी पनौतीमा प्रति सेकेण्ड ६.७ प्रति लिटर पानी उपलब्ध हुँदै आएकोमा थप २४ लिटर उपलव्ध हुनेछ । सो क्षेत्रबाट प्रति सेकेण्ड प्रति लिटर ७४ लिटर पानी कुशादेवी र भुमिडाँडावाट आउने छ र स्थानीय श्रोत वाट २० लिटर प्रति सेकेन्ड गरी ९४ लिटर प्रति सेकेण्ड खानेपानी उपलव्ध हुनेछ । धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकामा रहेका ६६ हजार जनताको लागि स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी २४ सै घण्टा आउँदा २५ बर्षसम्म पानीको अभाव हुनेछैन । हामी २५ वर्ष पछि पनि पानीको अभाव हुन नदिन थप श्रोतको पहिचानमा जुटिसकेका छौं । हामीले गर्ने विकास दिर्घकालिन हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
– आयोजनाले तीन शहरको विकासमा कस्तो सम्भावना लिएको छ ?
एकिकृत खानेपानी आयोजनाले सर्वप्रथम विकासमा तीन नगरमा साझेदारी गर्न सहयोग पु¥याएको छ । यसले खानेपानीमा मात्रै होइन तीन नगरमा हुने विकासका अन्य क्षेत्रहरु जस्तै फोहोरमैला, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, कृषि र व्यापारीक केन्द्र वनाउन सहयोग पुग्नेछ । जसको कारणले नेपालको उदाहरणीय र पुर्वाधार सम्पन्न शहर वनाउन सहज हुनेछ । राजधानी नजिकको शहर तथा देशको दुई प्रमुख राजर्माग, विश्व विद्यालय, गुणस्तरिय सुविधा सम्पन्न एशियाकै नमुना अस्पताल समेत भएकाले स्वस्थ जीवन र समृद्ध नगर वनाउने सम्भावना रहेको छ ।
– आयोजना सम्पन्न भएपछि पछि तीन नगरपालिकामा विद्यमान नेपाल खानेपानी संस्थान र उपभोक्ता समितिबाट संचालित खानेपानी योजनाको संचालन अब कसरी व्यवस्थापन हुनेछ ?
नेपाल खानेपानी संस्थान र सम्पुर्ण खानेपानी उपभोत्ता समितिहरु यो आयोजना अन्तरगत समाहित हुनेछन । यसको निर्णय नेपाल सरकारले काभ्रे उपत्यका एकिकृत खानेपानी व्यवस्थापन र्वाेड लाई प्रत्यायोजन गरीसकेको छ । सरकारको निर्णय भएपछि खानेपानी संस्थानसँंग संस्थागत सहमतिको प्रयास भैरहेको छ । संस्थागत समझदारीमा केही आन्तरीक छलफल भईरहेको छ । बनेपा र पनौती नगरमा सेवा प्रभाव हुँदै आएकोमा पर्याप्त सेवा पुग्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो र माग पछि हामीले नयाँ योजना सुरु गरेका हौ । वनेपामा हप्तामा ३ दिन दुई घण्टा धारामा पानी आउँछ भने पनौतीमा वजार क्षेत्रमा संस्थानले सेवा प्रदान गरेको छ । तर अधिकांश क्षेत्रमा साना उपभोत्ता समितिहरुले खानेपानी सेवा दिए पनि स्वच्छ र गुणस्तरिय, व्यवस्थित र पर्याप्त खानेपानीको सेवा नगरवासीहरुले पाउन सकेका छैनन । धुलिखेलमा नगरको अधिकांश भागमा खोनेपानी धुलिखेल खानेपानी उपभोत्तमा समितिले दिए पनि दिनको ३० मीनेट देखि ६ घन्टासम्म मात्र सेवा दिईरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा विश्व विद्यालय, पर्यटकीय क्षेत्र, अस्पताल र सदरमुकाम पनि भएकाले खानेपानीको अभाव उतिकै टड्कारो हुँदै गएको छ । तर्सथ सर्वसुलभ सेवा दिन संस्थान र उपभोत्ता समिति एकिकृत गरेर व्यवस्थापन गर्नेछौ । यसको प्रारुप तयार हुदैँछ । हामी सरोकारवालाहरुसंग परार्मश गर्दैछौ ।
– खानेपानीको श्र्रोत क्षेत्र कुशादेवी तथा भुमिडा“डा गाविसको लागि के सहमतिमा यहा“हरुले पानी ल्याउनु भएको हो र त्यस क्षेत्रको बिकासमा के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
लामो छलफल र परार्मश पछि दिर्घकालीन रुपमा खानेपानी उपलव्ध गर्न र श्रोत क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक हुँदै एक आपसमा विकास निर्माणको सहयोगी वन्ने सम्झौतामा पुगेका हौ । हामी आभारी छौ भुमेडाँडा र कुशादेवी गाविसका राजनैतीक दलका नेताहरु, पुर्व जनप्रतिनीधिहरु, समाजसेवी तथा नागरीकहरु, गाविस सचिवहरु जसले लामो तर गहकिलो, उदाहरणीय र विकासमा साझेदार भएर काम गर्न एकै ठाउँमा आइपुगेका छौ । भुमेडाँडा गाविसलाई ७५ लाख नगद, काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा विएसी तहमा छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य चौकीको स्तरउन्नती र खानेपानी सेवा वितरण भएपछि र्वािषक रोयल्टिको ब्यवस्था गर्नेछौ । र त्यसै गरी कुशादेवी गाविसलाई ६० लाख नगद, काठमाडौ विश्वविद्यालयमा विएसी तहमा छात्रवृत्ति, स्थानीय पुल, स्वास्थ्य चौकीको निर्माणमा पहल र खानेपानी सेवा वितरण भएपछि बार्षीक रोयल्टिको व्यवस्था गर्नेछौ । भने पनौतीमा १ करोड ७० लाखको सिंचाईको व्यवस्था गर्ने भएका छौ ।
– तीन नगरपालिकामा खानेपानी जस्तै फोहरमैला व्यवस्थापन, बसपार्क, दमकल र वातावरणीय सुधारमा के योजना गर्दे हुनुहुन्छ ?
मैले केहि कुरा माथि पनि भनिसकें । हालसालै काठमाडांै महानगरको सहयोगमा तीन नगरपालिकाको लागि तीनवटै नगरको पहलमा दमकल उपलव्ध भएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन, बसपार्क र वातावरणीय सुधार गर्न राजनैतिक तहमा नगरपालीकामा छलफल हुँदैछ । दातृ निकाय र सरकारसंग कोसिश भैरहेको आम नगरवासीहरुमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
– धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिका र यसको आसपासको गाविस मिलाएर उप महानगरपालिका वनाउन यहा“हरुले के पहल गर्नु भएको छ ?
संघिय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयकै मातहतमा वनेको समितिमा नयाँ नगरपालिका र मेट्रो सिटी वनाउने विषयमा अध्ययन भैरहेको छ । तर स्थानीय पहल भएको छैन । लामो सम देखि देशका अन्य नगरपालिकाहरुमा यो मेट्रो सिटीको अवधारणा शुरु गरिएको भए पनि हामीले पहल गर्दा गर्दै पनि स्थानीय क्षेत्रबाट जति पहल गर्नु पर्ने हुन सकेको छैन । यहाँले भने झै अब यो काम गर्दा यहाँको राम्रो विकासको आधार निर्माण हुन्छ यसको पहल अब अघि वढाउनु पर्छ । जिल्ला र स्थानीय दल, जनताको अभिमत वुझेर अघि वढनु पर्छ यसमा म सकारात्मक पहल गर्नेछु ।
– नेपाल सरकारले निर्णय अनुसार अरनिको राजर्मागमा २५ मिटर मापडण्द कार्यान्वयन गर्नसुचना जारी भैसकेको छ । तर स्थानीय जनताको बिरोध पनि शुरु भएको छ यसको सवालमा के हुनसक्छ ?
अन्तराष्ट्रिय स्तरको सडक वलाउन र त्यसले यहाँको शहरी जीवनमा आधुनिकता ल्याउन पनि यो कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । तर सरकारवाटै अरनिको राजर्मागमा कँही २५ गज र कही २५ मिटर भनेर असमान निर्णय गरेर अन्योल श्रृजना गरेको अवस्था छ । पहिले नै एउटा निर्णयमा जनतालाई हिडाएको भए ठुलो धनजनको क्षती हुने थिएन । तर पनि जनताको मर्का सरकारले वुझेर निर्णयमा पुग्दा राम्रो हुनेछ । जनता कमजोर हुनु राम्रो होईन । अरनिको राजमार्गमा एकरुपता कायम गर्दा हुन्छ । पहाडी क्षेत्र भएकोले २५ गज हुँदा पनि ठिकै हुन्छ । जनताले विरोध गरेको होईन आफनो मर्का सरकारलाई राखेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । जनताको भावना विपरित सरकार जानु हुँदैन । जान पनि सक्दैन ।
– तपाई नेपाल नगरपालिका संघको उपाध्यक्ष पनि हुनु हुन्छ । नेपालको शासन व्यवस्था संघियतामा जाँदैछ । तपाईहरुले त लामो समय देखि स्थानीय सरकार र विकेन्द्रीकरणको पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको छ । के तपाईहरुको अवधारण अनुसार हुने सम्भावना छ ?
हामी जहिले पनि जनताले घर दैलोमै सेवा पाउनु पर्छ भन्दै वकालत गर्दै आएका छौं । विकेन्द्रिकरणको माध्यमबाट स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जनताले पाउने सुविधा उसकै ढोकामा पु¥याउने हो भने त्यो भन्दा ठुलो केहि हुन सक्दैन । संघियताका नाममा पनि जनतालाई सेवा दिने भन्दा पनि को त्यसको प्रमुख बन्ने, को त्यहाँ शासक बन्ने कुराले संघियताको बहस भइरहेको छ ।
प्रस्ताव गरिएको नेपालको संघिय प्रणाली विश्वका कुनै पनि मुलुकका आधारमा सम्भव छैन । नेपालमा भएका सबै परिवर्तनहरु शासकका लागि मात्रै भए । जुन परिवर्तन आए पनि जनतामा अधिकार गएन । सिंहदरवारमा भएको अधिकार हामीले कहिल्यै गाविस र नगरपालिकामा दिन चाहेनौं । त्यसकारण पनि हरेक पटकका परिवर्तनहरुले जनतालाई सेवा भन्दा पनि अधिकारका लागि दुख दिने काम भयो । नेपालमा जनताको मौलिकतामा आधारीत शासन प्रणाली आवश्यक छ । जनताको घरदैलोमा सेवा पुग्ने, आर्थिक स्वायत्तता सहितको विकेन्द्रीकरणमा जानु पर्छ ।
नेपालमा कुनै प्रकारको संघियता टिक्ने अवस्था छैन । संघियताले नेपाल र नेपालीको जीवनलाई कष्टकर बनाउनेछ । संसारका धेरै देशहरुको अनुभवले पनि हामी देख्नेछौं्र नेपालको जातिय अवस्था, सघन बसोबास, सांस्कृतिक आधारहरुले संघियता टिक्दैन । आवश्यक पनि छैन । संघियताले मुलक सम्वृद्ध होइन द्वन्द्व तर्फ धकेल्ने छ । हामी विकेन्द्रिकरण मार्फत जनताको घरदैलोमै पुग्ने सेवा र आर्थिक स्वायत्तताको पक्षमा छौं ।
– धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकाको र यसको आसपासको गाविसमा शहरीकरणमा के गर्दा काठमाण्डौको बैकल्पीक सुन्दर शहर वनाउन सकिन्छ, सम्भावना छ ?
काठमाण्डौको वैकल्पीक शहर र नजिकको सेटलाईट सिटी भनेकै धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिका र यसको आसपासको गाविस हो । थानकोटमुनी, गोदावरीपाखा र वालाजुको पाखामा शहरको विस्तारको सम्भावना नभएको हुँदा यस तर्फ नै काठमाण्डौ विस्तार हुने हो । तसर्थ यस भेगको खानेपानीको काम हुँदैछ । शिक्षा र स्वास्थ्य केन्द्र वन्दैछ । व्यवसायीक रुपमा वनेपा अग्रणी छ । दुई राजमार्गको आधार छ । पर्यटनका लागि धुलिखेलमा सुन्दर र शान्त वातावरण छ । कृषि र सांस्कृतिक नगर पनौती रहेकोले यो वैकल्पीक शहरको आधार निर्माण हुँदै छ । अव थप १ हजार नयाँ घर वनाउन टाउन प्लान गर्नु पर्छ अन्यथा कुरुप शहर हुनेछ । ६ लेनको सडक धुलिखेलसम्म वनाउने, पनौती सडक ४ लेनको र तीन नगर र आसपासको सांगा, नाला, जनागाल, वाँसडोल, कुशादेवी, भुमिडाँडा, शँखु, वतासे, रविओपी र काभ्रे जोड्ने चक्रपथ वनाउने, अरनिको राजर्मागको विकल्पमा वाइपास सडक वनाउने, स्वच्छ, सुन्दर प्रदुषणमुक्त हरित शहर वनाउन जरुरी छ । वाईफाई फ्री क्षेत्र र धुलिखेलको जगंलमा जु सहितको वायोपार्क र पनौतीमा सम्पदा र आधुनिक कृषि क्षेत्र केन्द्र र वनेपामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सिटी सेन्टर वनाउनु पर्छ ।
– काभ्रे जिल्लाको विकासमा ठोस योजना के के वनाउनु भएको छ ?
मैले धेरै कुरा माथि पनि भनिसके । हामीले शुरु गरेका धेरै विकासका योजनाहरुलाई पुरा गर्ने हो भने काभ्रे बैकल्पिक काठमाडौको शहर बन्ने कुरामा निश्चित छ । यसका लागि ब्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक स्वर्थ सबैले त्याग्न सक्नु पर्छ । एकिकृत रुपमा भएका विकासका कामहरुलाई नगरबासीहरुले सघाउनु पर्छ । माथि उल्लेख गरेको अलावा तत्काल गर्न सकिने धुलिखेलसम्मको राजमार्गलाई ६ लेन, पनौती सम्मको सडक चार लेन, काभ्रे जिलको सडक र पर्यटन गुरुयोजना, महाभारतलेक र आसपासका जंगललाई वातावरणीय रुपमा विकास गरी संरक्षण गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकहरुका लागि पनि जंगलको संरक्षण सँगै सोहि क्षेत्रका स्थानीयहरुका आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने खालको योजनाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्ने, कुशादेवी भुमेडाँडा क्षेत्रमा रहेको जलाधार क्षेत्र आयोजनाको विकास गरी जीवनस्तर सुधार गर्ने, इन्द्रवाती खोलामा हाइड्रो पाओरका अलावा पाँचखाल र आसपासका क्षेत्रमा सिंचाई, त्यो क्षेत्रको खानेपानीको अभाव पुर्ति गर्ने, ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र नमोवुद्धलाई दोश्रो धार्मिक पर्यटकिय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने, शिक्षा, स्वाथ्य तथा कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास गर्न थुप्रै योजनाहरु छन् । राजनीतिको संक्रमणकालीन अवस्था र लामो समय देखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा यस्ता धेरै योजनाहरु चाहेर पनि पुरा गर्न सकेका छैनौं ।
– मुलुकको राजनितिक अवस्थाको कता जा“दैैछ ?
मुलुक यतिखेर चरम संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । दलहरु सहमतिमा पुग्न नसक्दा आम देशवासीमा फ्रस्टेसनको भाव उत्पन्न हुन थालेको छ । २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनको उभारलाई दलका शिर्ष नेताहरुले पुरा गर्न सकेनन । समयमै संविधान बन्न सकेन । दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन समेत अनिश्चित बन्दै गएको छ । दलहरुले वहालवाला प्रधानन्याधिशको नेतृत्वमा गठन गरेको सरकार प्रति केहि दल र नागरिक समाजको विरोध कायमै छ । यो सरकारले निर्वाचन गराए ठिकै छ भन्नेहरु पनि अहिले असन्तुष्ट देखिएका छन् । सर्सति रुपमा भन्नु पर्दा एमाओवादीको निर्वाचन नचाहने शैलीका कारण भएका सहमतिमा पनि अवरोध खडा गरेर मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेलिदै छ । दलहरु सहमतिमा पुग्न सकेनन भने मसिंरमा पनि यो सरकारले निर्वाचन गराउन सक्ला जस्तो लाग्दैन । आशा गरौ त्यस्तो नहोस् ।